China Compostable ahịhịa akpa emepụta na ndị na-ebu ngwaahịa | Leadpacks
Akpa mkpofu compostable na-enweghị ihe ọ bụla plastik！
Anyị factory compostable ahihia akpa na ihe na-gbaara dị ka compostable dị na European ọkọlọtọ EN 13432. Site n'iji akpa na environmentally friendly ihe ị na-egosi ma na-abụghị ụwa na ndị ahịa gị na i nwere a green profaịlụ ma na-akwado adigide mmepe.
Ọ bụrụ na ịchọrọ akpa mkpofu ahịhịa na-eji atụmatụ gị na akara aka gị, Leadpacks nwere ike inyere aka. Anyị na-enye ndị na akpa dị iche iche nha, shapes na ọkpụrụkpụ ona niile mkpa. Anyị nwere ike itinye akara ngosi, onyonyo ma ọ bụ ozi ndị ọzọ metụtara profaịlụ. A na-ebipụta akpa na-agagharị agagharị ruo na agba 4 n'akụkụ abụọ.
Akpa mkpofu ahịhịa mkpokọ ahịhịa ndụ bụ ọnwa 10-12.
Nkebi Aha Compostable ahihia akpa
Ihe onwunwe PLA / PBAT / ọka Starch
Ngwa Ahihia / imeghari, wdg
Anyị na-agba ama ugbu a na mmasi na-arịwanye elu n'ibelata ojiji nke rọba ọdịnala, ma ndị ahịa ma, ọkachasị, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọtụtụ mba ebutela iwu na mmachi iwu plastic. Omume a na-agbasa n’ụwa niile.
Akpa Leadpacks na 100% biodegradable na compostable ihe nwere ike itinye aka na ụlọ ọrụ na-acha akwụkwọ ndụ profaịlụ ma n'otu oge ahụ na-enyere aka melite gburugburu ebe obibi. Site na ezi akọ na uche, ị nwere ike iji akpa mkpofu compost maka ebumnuche ọ bụla ma tinye ha mgbe ị gachara.
Akpa ahịhịa mkpofu na-adabere n'ọtụtụ akụkụ nke ihe ọkụkụ sitere na ihe ọkụkụ. Nke a pụtara na-erughị obere CO2 n'ime ikuku, ebe osisi na-amịpụta CO2 ka ha na-eto, si otú a na-enwe mmetụta na gburugburu ebe obibi karịa imepụta plastik sitere na mmanụ.
Nke gara aga: Biodegradable Ewepụghị Bag
Akpa mkpofu ahịhịa
Akpa mkpofu Compostable
Plastic ahịhịa akpa